Cusboonaysiinta cusub ee Xiaomi Mi A2 waxay noo ogolaaneysaa inaan ku duubno 1080p at 60fps | Androidsis
El Xiaomi My A2, oo sidoo kale loo yaqaan Mi 6X ee Shiinaha, wuxuu ka helayaa cusbooneysiin cusub shirkadda. Tani waxay la timid sheeko cusub oo, marka hore, aaladda dhexdhexaadka ah aysan keenin, waana tan Duubista fiidiyowga FullHD oo dhan 60 meegaar ilbidhiqsi (1.080p at 60fps).
Ku darista dheefaha kamaradaha waxaa weheliya taageero loogu talagalay Xasilinta Sawirka Elektaroonigga ah (EIS), sidaa darteed qaraarkan cusub ee la taageeray sidoo kale shaqadan ayuu yeelan doonaa Isla markiiba, waa qayb ka mid ah balastarka amniga ee u dhigma bishaan, kaas oo la yimaada xoojinta qaybta amniga iyo xasilloonida, oo saxa khaladaadka yaryar ee nidaamka.
Cusbooneysiinta cusub ayaa horeyba u bilaabatay inay gaarto Xiaomi Mi A2In kasta oo ay suurtagal tahay inaadan weli haysan, maxaa yeelay, munaasabadaha, waxaa caadi ah in noocyada dhejisyada ah in yar lagu daahiyo telefoonnada gacanta qaarkood maxaa yeelay qaybinta ma aha mid le'eg gobollada oo dhan. Si loo hubiyo haddii aad gaartey boosteejada, waa inaan tagnaa qaabeynta.
Xusuuso taas qalabkan ayaa la soo saaray dhamaadkii bishii hore, oo waxay duubi kartaa oo keliya fiidiyowyada 720p oo ah 120fps, 1.080p at 30fps, iyo 2.160p at 30fps. Hadda xalka 1.080p ee 60fps waa la taageeray, sidaan horeyba u iftiiminnay.
Ogow: Xiaomi Mi A2 iyo Mi A2 Lite oo horeyba looga heli jiray Spain
Dib-u-eegista astaamaha ugu muhiimsan ee taleefannadan casriga ah, waxaan ka helnay shaashad 5.99-inch ah oo ah FullHD + qaraarka leh ilaalinta Corning Gorilla Glass 5, Qualcomm Snapdragon 660 octa-core processor, 4 / 6GB RAM, 32/64 / 128GB oo ah meel lagu keydiyo. keydinta gudaha iyo batteriga 3.010mAh oo leh Quick Charge 3.0 tikniyoolajiyad degdeg ah. Intaas waxaa dheer, qalabku wuxuu leeyahay laba 12 iyo 20MP dareemayaal sawir leh oo ku yaal dhabarka dambe, halka, dhinaca kale, toogte 20MP ah ayaa mas'uul ka ah qaadashada sawirrada iyo wicitaannada fiidiyowga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Xiaomi Mi A2 wuxuu helaa cusbooneysiin u oggolaanaya inay ku duubto 1080p at 60fps
Barnaamijyada duubista wicitaanku kama shaqeeyaan Android 9.0 Pie